जहाँ २० मिनेटका लागि पाइन्छ भाडामा प्रेमिका
एजेन्सी चीनको एक सहरमा भाडामा प्रेमिकाको व्यवस्था गरिएको छ । एक्लोपन महसुस गर्दै आएका युवालाई ध्यानमा राखेर गुआङ्गडोङ्ग प्राप्तको ह्युआन सहरमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ‘दि भिटालिटी सिटी सपिङ्ग कम्प्लेक्स’ मा भाडाका प्रेमिका बन्न तयार युवती लस्करै उभिएका हुन्छन् । भाडामा प्रेमिका बनाउनका लागि कम्तीमा २० मिनेटको शुल्क तिर्नुपर्दछ । २० मिनेटका लागि १ आरएमबी (१७ रुपैयाँ नेपाली) को हाराहारीमा शुल्क तिर्नुपर्दछ । त्यसभन्दा…विस्तृत समाचार »
६ वर्षको प्रेमपछि हवाईजहाजसँग विवाह गर्दै यि युवती
काठमाडौं। जर्मनीको राजधानी बर्लिनकी ३० वर्षकी युवतीले यही मार्चमा बोइङ ७३७–८०० विमानसँग बिहे गर्दै्छिन् । बिहे एम्स्टर्डममा हुनेछ । उनले पहिलोपटक बोइङ विमानलाई टेगल एयरपोर्टमा मार्च २०१४ मा देखेकि थिइन् । त्यतिबेलादेखि नै उनले विमानसँग प्रेम गर्न थालेकी थिइन् र बिहेको योजना बनाएकी थिइन् । युवतीको नाम मिशेल कोब्के हो । यी युवतीलाई विमानका पखेटा, विंगलेट्स र थ्रस्टर्स मन पर्छन् । कोबकेका अनुसार यो उनको…विस्तृत समाचार »
कुकुरको पनि काजक्रिया ! १३ औं दिनमा मालिकले खुवाए ११ सय जनालाई प्रसाद
काठमाडौं । हिन्दु धर्माबलम्बीहरुमा मानिसको मृत्युपछि किरिया गर्ने, पितृ पूजा गर्ने तथा १३ औँ दिनमा मलामीलाई खुवाउने चलनका बारेमा त हामी सबै जानकार नै छौँ । तर भारतको उत्तर प्रदेशमा चाहिँ एउटा कुकुरको अन्तिम संस्कार र मलामी भोजन निकै चर्चित बनेको छ । मुजफ्फरपुर जिल्लास्थित कालू नामको उक्त कुकुरको मृत्युमा गाउँ नै शोकमा पर्यो । कुकुरको मृत्युपछि विधि विधान अनुसार अन्त्येष्टि गरियो । तेह्रौँ दिनमा…विस्तृत समाचार »
​‘रहस्यमय’ गुफा, भित्र पसेपछि निस्कनै गाह्रो
१८ पौष २०७६
काठमाडौं । भारतको मेघालयमा एउटा यस्तो गुफा छ । रहस्यमय तरिकाको । वैज्ञानिकहरुले सन् २०१६ मा पत्ता लगाएको उक्त गुफा बालुवा र पत्थरको विश्वमा सबैभन्दा लामो रहेको मानिन्छ । भयावह देखिने यो गुफामा अचम्मको प्रवेशद्वार छ, जो कुनै भूलभुलैया भन्दा कम छैन । गुफाभित्र एक पटक पसेपछि बाहिर निस्कन पनि मुस्किल हुन्छ । यो गुफाको नाम हो, क्रेम पूरी। २४.५ किलोमिटर लामो यो गुफा सर्वाधिक…विस्तृत समाचार »
१६ पौष २०७६
काठमाडौं । इन्स्टाग्रामकी एक चर्चित मोडलले २ लाख ५० हजार पाउन्ड इन्गेजमेन्ट रिङ्ग स्विकार त गरिन् तर व्यक्तिको प्रस्ताव भने अस्विकार गरेकी छिन् । लण्डनकी अमान्दा क्रोनिनलाई एक सुन्दर अपरिचित व्यक्तिले भान क्लिफ एण्ड आरपेल्स ब्रान्डको हिराको औंठी दिएर प्रस्ताव गरेका थिए । उनीहरु न्यूयोर्क होटलमा पहिलो पटक भेटेका थिए । इन्स्टाग्राम मोडलको रुपमा परिचित उनलाई प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति उत्तरी युरोपका निकै प्रभावशाली व्यक्ति भएको…विस्तृत समाचार »
​सपनीमा मरेका मानिस देखिनुको अर्थ के ?
काठमाडौं । जीवन र मरण जीवनको सबभन्दा ठूलो सत्य हो । जन्मिने मान्छे मर्नैपर्छ । आफूनजिक रहेका मृत व्यक्ति कहिलेकाहीँ सपनामा आउँछन् । यस्तो अनुभव अनौठो रहस्यमय हुन्छ । मनोविज्ञानका अनुसार सपनाहरूमा विशेष सन्देश लुकेका हुन्छन् । सपनामा देखापरेर मृत व्यक्तिहरूले निर्देशन वा आश्वासन दिन्छन् । पछि हुने कुनै नराम्रो घटनाका बारेमा सावधान पनि गराउँछन् । सपनामा लुकेका सन्देश बुझ्दा मान्छेले जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ…विस्तृत समाचार »
​गर्भवतीलाई गाउँपालिकाले दिएको अण्डा श्रीमानले रक्सीको ‘सितन’ बनाइदिएपछि...
२६ मङ्सिर २०७६
२६ मंसिर, गुल्मी । गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका जयाखानी र खड्गकोटका गर्भवती महिलालाई दिएको अण्डा पुरुषले सितन बनाएर रक्सीसँग खाईदिएका खुलेको छ। पोषण परिपूर्ति गर्न गर्भवतीलाई दिएको अण्डा नै सितन बनाइदिएपछि गाउँपालिकाले यसपटक महिलाहरुलाई फिल्टर वितरण गरेको छ। गाउँपालिकाका ३ र ६ नम्बर वडाका केही पुरुषले आफ्नी गर्भवती श्रीमतीलाई राज्यले दिएको अण्डा रक्सीको सितन बनाएर खाइदिएका हुन्। फिल्टर वितरण गर्दै गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तारा थापाले गतबर्ष…विस्तृत समाचार »
प्रेममा धोका पाएपछि प्रेमिको लिंग काटिदिइन प्रेमिकाले
२५ मङ्सिर २०७६
काठमाडौं । कपनमा एक युवतीले प्रेममा धोका पाएपछि आफ्नो प्रेमीको लिंग काटिदिएकी छिन । गएराति आफ्नै कोठामा बोलाएर ति युवतीले प्रेमीको लिंग काटिदिएको महानगरीय प्रहरी वृत बौद्धका डिएसपि रमेश सिंहले जानकारी गराए । युवक र युवतीको नाम गोप्य राखिएको छ । उनीहरु एक वर्ष देखी प्रेम सम्बन्धमा रहेका छन । एक हप्ता अघि युवकले घरायसी कारण देखाउदै विवाह गर्न नसक्ने बाहना बनाउदै आएपछि अन्तिम पटक…विस्तृत समाचार »
बेलायतकी ७३ बर्षीया बृद्धाको म्याराथन : नेपालका भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्न ६ हजार माइलको यात्रा
२५ मंसिर, काठमाडौं । बेलायतकी ७३ वर्षीया एक बृद्धा नेपालमा भूकम्प पीडितका लागि सहयोग जुटाउनका लागि लण्डनदेखि काठमाडौंसम्मको म्याराथनमा टर्की पुगेकी छन् । रोजी स्वाले पोपले यसरी म्याराथन थालेकी हुन् । यो म्याराथनको दूरी ६ हजार माइल हुनेछ । उनले नेपालका भूकम्प पीडितलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर सुधार्नका लागि यो म्याराथन शुरु गरेको जनाएकी छन् । यो म्याराथन मानिसलाई खाना दिने कुरा मात्रै होइन उनीहरुलाई…विस्तृत समाचार »
मोबाइल किन्दा एक किलो प्याज सित्तैमा
२३ मङ्सिर २०७६
२३ मंसिर, काठमाडौं । भान्छामा अत्यावश्यक प्याज महँगो हुन थालेपछि कतिपयले यसलाई खानै छाडेका छन्। भारतमा प्याज हाहाकार भएपछि नै नेपालमा पनि मूल्य बढेको हो । भारतमा पनि प्याज निकै महँगो छ । प्याज महँगो हुन थालेपछि व्यापारीहरुले विभिन्न प्रकारका ‘अफर’ ल्याउन थालेका छन्। यसै क्रममा भारतको तामिलनाडु राज्यको एक मोबाइल व्यापारीले आफ्नो पसलमा मोबाइल खरिद गरेमा एक केजी प्यास सित्तैंमा दिन थालेका छन्। तामिलनाडु…विस्तृत समाचार »